यी राजमार्गमा बन्दैछन् चार्जिङ स्टेसन, के–के हुनेछन् सुविधा ? - Recent Nepal News
यी राजमार्गमा बन्दैछन् चार्जिङ स्टेसन, के–के हुनेछन् सुविधा ?
प्रकाशित मिति: शनिबार, मंसिर ०४, २०७८ समय: ८:२९:०१
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत वर्ष निर्माण शुरू गरेको ५० वटा चार्जिङ स्टेसन ६ महिनाभित्र सम्पन्न गरिने भएको छ । प्रमुख राजमार्गका ३२ स्थानमा ५० वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण भइरहेका छन् । प्राधिकरणले विद्युतीय सवारीसाधनका लागि चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिएको हो ।
मोबाइल एप्सबाट चार्ज गर्ने समय र स्थान बूक गर्नुका साथै अनलाइन भुक्तानी गर्न सकिने छ । सबै स्टेसनको नियन्त्रण काठमाडौंबाट हुनेछ । स्टेसनमा खाना, खाजाका लागि रेस्टुरेन्टको व्यवस्था हुनेछ । गोरखापत्रमा खबर छ ।